Mandany $ 299 ary alefaso amin'ny Yahoo ny tranokalanao? | Martech Zone
Mandany $ 299 ary alefaso amin'ny Yahoo ny tranokalanao?
Alarobia, Jona 10, 2009 Alarobia, Jona 10, 2009 Douglas Karr
Azonao atao ny manohy am-pitandremana rehefa mampiasa ny sasany amin'ireo fitaovana SEO an-tserasera mahazatra ary mamaky ny sasantsasany amin'ireo forum momba ny fomba hampitomboana ny laharan'ny toerana misy anao, ny fahefana ary ny backlinks… ny sasany amin'ireo fampahalalana ireo dia efa nilaozan'ny toetr'andro.
Raha ny zava-misy dia namaky tamina tranonkala vitsivitsy aho fa ny fandefasana ny tranokalanao amin'ny lahatahiry Yahoo! Dia hevitra tsara. $ 299, ny tranokalanao dia voatanisa ao anatin'ny Yahoo! lahatahiry orinasa, navoaka tao amin'ny pejin'ny lahatahiry Yahoo nandritra ny iray andro, ary angamba nahasarika olona sasany tamin'ireo tranonkala hafa mahita Yahoo! amin'ny maha-fahefana.
Raha mieritreritra ianao fa ny fisotroana maitso miakatra miadana dia solontenan'ny fiakaran'ny fifamoivoizana azoko tamin'ny fividianana… diso ianao. Fifamoivoizana izany alohan'ny Nosoratako tamin'ny Yahoo! Nidina tao amin'ny Yahoo! fitadiavana fifamoivoizana hatrizay.
Angamba tsy tena mahita ny olona ny Yahoo! amin'ny maha-fahefana ahy (fanesoana sasany ao…… antenaiko fa kely fivezivezena kely). Mampalahelo fa ny fivezivezena biolojika avy amin'ny motera fikarohana an'ny Yahoo! fihenam-bidy tsy miova… Fa soa ihany (antsapaka fanesoana eto), 17 mpitsidika tonga tao amin'ny tranokalako avy amin'ny lahatahiry Yahoo tao anatin'ny 60 andro lasa. Raha mitohy izany, dia ho mpitsidika vaovao 100 eo ho eo no ho tonga ao amin'ny bilaogiko amin'ny taona manaraka - amin'ny vidiny $ 3 isanisany.
Manaraka? Ny tsara indrindra amin'ny tranonkala… Raha vantany vao haiko (99 $ miverimberina) ary Business.com $ 299 isan-taona indray.
Tags: 1ShoppingCartonjaMitadiava valinyMailaka saryiContactJonathanMadmimi
Inona ny ROI amin'ny aretin'andoha?
Misaotra-anao tamin'ny fankasitrahana androany, Indy!
Jun 10, 2009 ao amin'ny 11: 49 PM
Hey Doug misaotra anao nanondro fa ho ahy dia nieritreritra ny hanao zavatra mitovy aho. Heveriko fa tsy hoheveriko ho an'ny tenako na ho an'ny mpanjifako SEO izany.
Manontany tena aho raha ny olana dia hoe lahatahiry mandray karama Yahoo fa tsy maimaim-poana? Noboody te-hahita olona mividy ny làlana mankany an-tampony. Imbetsaka ny olona no mitady fotsiny hahazoana backlinks MORE fa ny tena zava-dehibe kokoa dia ny fiheverana ny manodidina azy ireo ary ny lahatahiry mandray karama dia matetika tsy ireo tsara indrindra. Ny zavatra iray sisa azoko eritreretina dia rehefa nampidirinao ny lisitry ny lisitry ny lisitry ny lisitry ny lisitry ny lisitry ny lisitry ny lisitry ny lisitry ny lisitry ny lisitry ny lisitry ny teny anglisy Izany dia hahatonga anao ho mpilalao amin'ny lalao teny lehibe fa lavitra kokoa ny tohatra.
11 Jun 2009 amin'ny 8:26 AM
Anananao ny vatako, Andriamatoa! Tsy misy fanontaniana apetraka…
11 Jun 2009 amin'ny 10:11 AM
Tsy dia miombon-kevitra aminao matetika aho, fa amin'ity tranga ity dia tsy maintsy. Hatramin'ny Google vao haingana, ao amin'ny torolàlana momba ny webmaster no nanoro hevitra anao hanana lisitra ao amin'ny Yahoo! lahatahiry tranonkala. Ny fiasan'izy ireo tamin'ny fanesorana azy dia TSY satria tsy misy lanjany izany, fa tsy hitan'izy ireo ny filàna manome izany sosokevitra izany.
Raha mifantoka amin'ny fifamoivoizana avy amin'ny lisitra ianao dia tsy hahita ilay hevitra. Tahaka ny misy rohy MISY, amin'ny tranokala ANTOKA, tsy voatery hoe te-hivezivezy ianao avy amin'izany rohy IZAO, fa ny hampiakatra ny laharam-pahamehana ho an'ny teny lakile manokana.
Raha sarobidy ny fahefana avy amin'ireto rohy ireto - maninona ianao no tsy mandoa $ 99 na $ 299 amin'izany? Raha ny hampitombo ny habetsaky ny rohy miditra mankany amin'ny tranokalanao no tanjonao - maninona no tsy heverinao farafaharatsiny ho safidy io? Raha misy olona mitoraka bilaogy momba ny fanomezana karatra kafe Starbucks raha misy mahita demo, ary avy eo ny rohy izay manolotra ny tranokalan'izy ireo… tsy lafo kokoa noho ny Yahoo! lahatahiry?
11 Jun 2009 amin'ny 10:57 AM
Nanantena ny hangataka valiny vitsivitsy avy amin'ny mpomba sasany ao amin'ny indostria aho. Marina ny anao - resaka famerenam-bola daholo izany. Raha toa ka miteraka fidiram-bola $ 17 ireo mpampiasa 600 ireo dia tsy misy dikany izany. Saingy tsy miresaka fitsidihana fotsiny no resahiko eto fa miresaka momba ny mpomba ny SEO milaza amin'ireo olona hisoratra anarana amin'ireo serivisy ireo mba hananganana fahefana.
Tsapako fa tranonkala iray ihany aho, saingy vitsy ny mpitsidika, latsaka ny fifamoivoizana, tsy mitombo ny pagerank, tsy misy fampandrenesana Google momba ny rohy vaovao hita… nitaona ahy hino fa tsy misy antony hanaovana izany intsony. Aiza aho no tsy mety?
PS: Starbucks… mampihomehy ianao!
Jun 11, 2009 ao amin'ny 8: 58 PM
Google ihany no ampiasaiko ho toy ny motera fikarohana manam-pahefana hanamarinana ny filaharan'ny tranonkalako.
Yahoo sy MSN dia tsy tapaka amin'ny laharam-pahamehany.